အသစ်စက်စက်တွေ့ရှိရသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လူနာလေး ဦး တွင်တစ် ဦး သည်နေ့စဉ်လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုမှလူငယ်လူကိုစိုးရိမ်သောပုံဖြစ်သည် (2013) - Your Brain On Porn
comments: နယူးအီတလီလေ့လာမှုအသစ်လူနာကြောင်း 25% ကိုတွေ့ ပြင်းထန် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု 40 အောက်မှာရှိပါတယ်။
နိဂုံး: ဒါကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသစ်ကိုစတင်ခြင်း ED များအတွက်ပထမဦးဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြံလေးလူနာတဦးတည်း 40 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လုလင်နီးပါးတစ်ဝက်အဟောင်းတွေလူနာအတွက်နှိုင်းယှဉ်နှုန်းထားများနှင့်အတူပြင်းထန်သော ED ထံမှခံစားခဲ့ရသည်။ ယေဘုယျအားလူပျိုတို့ကိုလက်တွေ့နှင့် sociodemographic နှစ်ဦးစလုံး parameters တွေကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဟောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ကွဲပြားပါတယ်။
J ကိုလိင် Med ။ 2013 Jul;10(7):1833-41. Doi: 10.1111 / jsm.12179 ။
Capogrosso P ကို, Colicchia M က, Ventimiglia E ကို, Castagna, G, Clementi MC, Suardi N ကို, Castiglione က F, Briganti တစ်ဦးက, Cantiello က F, Damiano R ကို, Montorsi က F, Salonia တစ်ဦးက.
Urology ဌာန, တက္ကသိုလ် Vita-နှုတ်ဆက်စန်း Raffaele, မီလန်, အီတလီ။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) အသက် 40 နှစ်အတွင်းယောက်ျားတစ်ဘုံတိုင်ကြားချက်ဖြစ်ပြီး, ပျံ့နှံ့နှုန်းအိုမင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးတိုးမြှင့်။ လုလင်တို့သည်အကြားပညာရေး၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အန္တရာယ်အချက်များ scantly ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
သူတို့ရဲ့အဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်အသစ်သောစတင်ခြင်း ED များအတွက်ပထမဦးဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြံ (≤ 40 နှစ်ပေါင်းအဖြစ်သတ်မှတ်) လူပျို၏ sociodemographic နှင့်လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများအကဲဖြတ်။
439 ဆက်တိုက်လူနာထံမှ sociodemographic နှင့်လက်တွေ့ data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်ဖြည့်စွက်။ ကနျြးမာရေး-သိသိသာသာ comorbidities အဆိုပါ Charlson Comorbidity ညွှန်းကိန်း (CCI) နဲ့သွင်းယူခဲ့ကြသည်။ လူနာ Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF) ပြီးစီးခဲ့သည်။
ဖော်ပြသောကိန်းဂဏန်းများအရ ED လူနာများအကြား i နှစ် ၄၀ နှင့်> နှစ်ပေါင်း ၄၀ အတွင်း sociodemographic နှင့်လက်တွေ့ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
114 နှစ်ပေါင်း≤မူလတန်းရောဂါ 26 ၌တွေ့အဖြစ်နယူးစတင်ခြင်း ED (40%) ယောက်ျား (:; 32.4-6.0 နှစ်ပေါင်းအကွာအဝေး 17  [စံသွေဖည် [SD က]] အသက်အရွယ်ဆိုလို) ။ နှစ်ပေါင်း ၄၀ အတွင်းလူနာများအနေဖြင့် comorbid အခြေအနေများ (၉၀.၄% နှင့် ၅၈.၃% တွင် CCI = 40; χ (0), 90.4; P <58.3)၊ ပျမ်းမျှခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းကိန်း (P = 2)၊ သူတို့အား> အနှစ် 39.12 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့် (P = 0.001) ပျံ့နှံ့နေတဲ့ပိုမိုမြင့်မားယုတ်။ ငယ်ရွယ်သော ED လူနာများသည်အသက်ကြီးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်တရားမဝင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းအလေ့အထကိုမကြာခဏပြလေ့ရှိကြသည် (အားလုံး P ≤ 0.02) ။ Peyronie ၏ရောဂါအဟောင်းအုပ်စု (အားလုံး P = 0.03) တွင်ပျံ့နှံ့နေစဉ်အချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်မှုငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများအတွက်ပိုမို comorbid ခဲ့သည်။ IIEF၊ ပြင်းထန်သော ED နှုန်းများသည်သက်ငယ်အမျိုးသား ၄၈.၈% နှင့်လူကြီး ၄၀% တွင်အသီးသီးရှိသည် (P> 48.8) ။ အလားတူစွာပျော့ပျောင်းမှအလယ်အလတ်နှင့်အလယ်အလတ် ED နှုန်းသည်အုပ်စုနှစ်ခုအကြားသိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ။
ဒါကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသစ်ကိုစတင်ခြင်း ED များအတွက်ပထမဦးဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြံလေးလူနာတဦးတည်း 40 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ Aအသက်ကြီးသောလူနာအတွက်နှိုင်းယှဉ်နှုန်းထားများနှင့်အတူပြင်းထန်သော ED ခံစားခဲ့ရလုလင် lmost တဝက်,. ယေဘုယျအားလူပျိုတို့ကိုလက်တွေ့နှင့် sociodemographic နှစ်ဦးစလုံး parameters တွေကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဟောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ကွဲပြားပါတယ်။
အသက်, လက်တွေ့အလေ့အကျင့်, Comorbidities, သက်ကြီးရွယ်အိုများအား, Erectile အလုပ်မဖြစ်, ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း, Erectile ရာထူးအမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း, အန္တရာယ်အချက်များ, Young က
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) အသက် 40 နှစ်အတွင်းယောက်ျားတစ်ဘုံတိုင်ကြားချက်ဖြစ်ပြီး, ပျံ့နှံ့နှုန်းအိုမင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးတိုးမြှင့် .
ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အတူပုံမှန်အားဖြင့်ပွင့်လင်း ED ၏ဘာသာရပ်အပေါ်စာမူအများစုဟာ, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလအကောင့်သို့မဆိုလူဦးရေသို့မဟုတ်အပြေးပြိုင်ပွဲကိုယူပြီး၏,
မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လေ့လာမှု / အဆိုပါသုတေသီပိုင်ဆိုင်လျက်, စာမူသူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်ဝေခဲ့ကြဘယ်မှာမဆိုသိပ္ပံနည်းကျဂျာနယ်၏။ သည်အခြားအသုံးအနှုန်းများမှာယောက်ျားရအဟောင်းများ, ပိုသူတို့ ED နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်စတင်ပါ .
တစ်ပြိုင်တည်းတွင် ED သည်နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်အဓိကသက်ရောက်မှုအဖြစ်ယူဆပြီးအမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးကိုထင်ဟပ်စေသောတဖြည်းဖြည်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ acquired မှရရှိခဲ့သည်
လယ်ယာ [3-6]။ ထို့ကြောင့် ED သည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ဘဝ၏လူမှုရေးရှုထောင့်များအပေါ်သက်ရောက်မှုကြောင့်ဆေးပညာနယ်ပယ်၌သာမကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်၌ပါအရေးပါသောအရေးပါမှုကိုရရှိခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ ဤခေါင်းစဉ်အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတိုးများလာခြင်းသည်များစွာသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
လူနာကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းအစုအကြားပညာရေး၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အန္တရာယ်အချက်များနှင့် ပတ်သက်. စစ်တမ်းများ [7, 8]; ဤအခြေအနေတွင်ထဲမှာ, ထုတ်ဝေသည့်ဒေတာအများစုအသက် 40 နှစ်ပေါင်းအထက်လူတို့သညျပိုမိုအထူးသအသက်ကြီး-အလယ်တန်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအထီးလူဦးရေကိုရည်ညွှန်းနှင့် [7-9]။ အမှန်မှာယောက်ျားအိုမင်းနှင့်ဆက်ဆက်သက်ကြီးရွယ်အိုများပိုမိုမကြာခဏ comorbid အခြေအနေများ-ထိုကဲ့သို့သောဆီးချို, အဝလွန်ခြင်း, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကို (CVD) နှင့်အနိမ့်ဆီးကျေးရွာအုပ်စုရောဂါလက္ခဏာတွေအဖြစ် (LUTS) ED များအတွက်ကောင်းစွာ-ထူထောင်အန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ကြသည်ကိုအကုန်အရာကနေဆငျးရဲခံရ [7-12].
ပြောင်းပြန်လူပျိုတို့အကြားပညာရေး၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အန္တရာယ်အချက်များ scantly ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ယောက်ျား၏ဤအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ပေါ်ဒေတာကို2နှစ်ရှိပြီထက်အသက်ငယ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် 40% နီးပါး 40% အကြားအထိ ED ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းပြသ [13-16]။ တစ်ဦးချင်းစီ၏ဤတိကျတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင် erectile function ကိုချွတ်ယွင်း၏တိုင်ကြားသူကိုအသက်ကြီး၏တူညီသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များမျှဝေဖို့မထင်ခဲ့ဘူးပေမယ့်ယေဘုယျအားထုတ်ဝေခဲ့သည် data တွေကိုလူပျိုတို့အတွက်ပညာရေး၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေး [15, 16]ဤသို့တစ်ဦး psychogenic အစိတ်အပိုင်းစိုက်ထူသို့မဟုတ် erectile function ကိုချို့ယွင်း-related ဒုက္ခဆင်းရဲပုံမမှန်နှင့်အတူအသက်ငယ်လူနာအတွက်ပိုပြီးအဖြစ်များကြောင်းယုံကြည်ဖို့ဦးဆောင် .
တစ်ဖွဲ့လုံးနှင့်အမျှအားလုံးနီးပါးလေ့လာမှုများအထွေထွေလူဦးရေမှ ED ဆွေမျိုးတစ်ဦးပျံ့နှံ့သတင်းပို့, ဤသဘောဆက်စပ်ခြင်းမရှိလက်တွေ့ကျတဲ့ဒေတာရှိပါတယ်
အဆိုပါနေ့စဉ်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့; အလားတူမရှိ data ကိုအမှန်တကယ်မိမိတို့၏စိုက်ထူ၏အရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာတစ်ခုများအတွက်လက်တွေ့ setting ကိုအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာသောသူတို့သည်ငယ်ရွယ်လူနာနှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းစွာရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီဦးတည်ချက်အတွက်ကျနော်တို့တစ်ခုတည်းပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ပထမဦးဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြံဆက်တိုက်ကော့ကေးဆပ်-ဥရောပလူနာတစ်ဦးဆောင်များတွင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် (မတရားဖမ်းဆီးအသက်≤40နှစ်ပေါင်းသတ်မှတ်) လူပျိုတို့အတွက်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ပညာရေး၏ခန့်မှန်းအကဲဖြတ်ဖို့ရှာကြံလျက်နေ၏။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတည်းပညာသင်နှစ်ပြင်ပလူနာဆေးခန်းမှာဇန်နဝါရီလ 790 နှင့်ဇွန်လ 2010 အကြားအသစ်သောစတင်ခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ပထမဦးဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြံ 2012 ဆက်တိုက်ကော့ကေးဆပ်-ဥရောပလိင်တက်ကြွလူနာတစ်ဦးဆောင်များတွင်ပေါ်တွင်အခြေခံခဲ့သည်။ ဒီရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှုများ၏တိကျသောရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ED ၏စောဒကလူနာထံမှသာဒေတာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်မှာရန်, ED ကျေနပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်လုံလောက်သောတစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဇွဲနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ .
လူနာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံ sociodemographic ဒေတာအပါအဝင်အသေးစိတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်လိင်သမိုင်းနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ကနျြးမာရေး-သိသိသာသာ comorbidities အဆိုပါ Charlson Comorbidity ညွှန်းကိန်း (CCI) နဲ့သွင်းယူပေးခဲ့သည်  တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ခွဲခြား variable ကို (ဆိုလိုသည်မှာ0vs. 1 vs. ≥2) အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံး။ ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြု ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး, 9th တည်းဖြတ်မူ, လက်တွေ့ပြုပြင်မွမ်းမံ။ တိုင်းတာခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း (BMI),
စတုရန်းမီတာအတွက်အမြင့်အားဖြင့်ကီလိုဂရမ်အတွက်အလေးချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်, တစ်ခုချင်းစီစိတ်ရှည်ဘို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ BMI, ကြှနျုပျတို့အားဖြင့်အဆိုပြုထားသည့် cutoffs ကိုအသုံးပြု
ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes : ပုံမှန်အလေးချိန် (18.5-24.9), အဝလွန် (25.0-29.9) နှင့်လူတန်းစား ob1 အဝလွန်ခြင်း (≥30.0) ။ သွေးတိုးရောဂါကိုဆေးသောက်သည့်အခါနှင့် / သို့မဟုတ်သွေးပေါင်ချိန် (for140 mm Hg sstolic သို့မဟုတ်≥90 mm Hg diastolic) အတွက်သွေးတိုးကိုသတ်မှတ်သည်။ lipid- လျှော့ချကုထုံးကိုယူသောအခါနှင့် / သို့မဟုတ် High-သိပ်သည်းဆ lipoprotein ကိုလက်စထရော (HDL) ကိုလက်စထရော <40 မီလီဂရမ် / dL အခါအခါ Hypercholesterolemia သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ပလာစမာ triglycerides ≥150 mg / dL သောအခါအလားတူစွာ hypertriglyceridemia ကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည် ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လက်စထရောပညာရေးအစီအစဉ်-အရွယ်ရောက်ကုသမှု Panel ကို III ကို  စံယခင်က ED နှင့်အတူယောက်ျား၏တစ်ခုလုံးကိုဆောင်များတွင်အတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ (MeTs) ပျံ့နှံ့သတ်မှတ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ဤလေ့လာမှု၏တိကျသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်လက်တွေ့ဇီဝဓါတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်း၏လေ့ကျင့်ခန်းကိုထင်ဟပ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သည့်သရုပ်ခွဲနည်းများကို အသုံးပြု၍ စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းပမာဏ (tT) ကိုပျံ့နှံ့စေရန်တိုင်းတာသည်။ Hypogonadism tT <3 ng / mL အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည် .
လူနာတူညီတဲ့မိတ်ဖက်ခဲ့လျှင်လူနာများပြီးနောက် "တည်ငြိမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာ" အဖြစ်သတ်မှတ်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်အတန်း (အဆိုအရ stratified ခဲ့ကြသည်
ခြောက်လသို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ဆက်တိုက်လအတွင်းသည် ဖြစ်. , မဟုတ်ရင် "မတည်ငြိမ်တဲ့ဆကျဆံရေး" သို့မဟုတ်မုတ်ဆိုးမကဲ့သို့) ။ အလားတူပင်လူနာတစ်ဦးအထက်တန်းကျောင်းဒီဂရီအုပ်စုတစ်စု, တစ်ဦးပညာရေးနိမ့်အဆင့်ကိုအုပ်စုသည် (ဆိုလိုသည်မှာ, မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းကပညာရေး) သို့၎င်းတို့၏ပညာရေးအဆင့်အတန်းအရသိရသည် segregated ခဲ့နှင့်မြင့်မားသောပညာရေးအဆင့်ကို (ဆိုလိုသည်မှာ, တက္ကသိုလ် / ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ) ဖြင့်ယောက်ျား၌တည်၏။
ထို့အပြင်လူနာ Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF) ဖြည့်စွက်ရန်မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည် ; Cappelleri et al နေဖြင့်အဆိုပြုအဖြစ်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ED ပြင်းထန်မှုပြန်ဆိုဘို့ရည်ညွှန်းတဲ့ဘောင်များကိုကျနော်တို့ IIEF-erectile function ကိုဒိုမိန်းခွဲခြားအသုံးပြုခဲ့သည်။ .
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏အဓိကအဆုံးအမှတ်ကိုသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြံလူပျိုတို့အတွက်ပျံ့နှံ့နှင့်အသစ်စတင်ခြင်း ED ၏ခန့်မှန်းအကဲဖြတ်ရန်ခဲ့သည်
အဆိုပါနေ့စဉ်လက်တွေ့ setting ကိုအတွက်အသက် 40 နှစ်ပေါင်း၏အသုံးများလိုမင်းထက် cutoff အရသိရသည်။ အမျိုးမျိုးသော IIEF domains များနှင့်အတူဂိုးအဖြစ်အလယ်တန်းအဆုံးအမှတ်, ခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ပဲ, အဟောင်းတွေလူနာနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကအသက် 40 နှစ်ပေါင်းထက်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများတွင်ကွဲပြားခြားနားသွင်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤလေ့လာဆန်းစစ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်အရ ED အသစ်စတင်ခြင်းနှင့်ပထမဆုံးဆေးကုသမှုခံယူရန်လူနာများကိုအသက် ၄၀ အရွယ်အမျိုးသားများနှင့်အသက် ၄၀ နှစ်ရှိအမျိုးသားများသို့ခွဲစိတ်ခဲ့သည်။ ဖော်ပြချက်စာရင်းဇယားများ၏လက်တွေ့နှင့် sociodemographic ဝိသေသလက္ခဏာများကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့လျှောက်ထားခဲ့သည်
အုပ်စုနှစ်စု။ ဒေတာကိုဆိုလို (စံသွေဖည် [SD က]) အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်။ နည်းလမ်းနှင့်အချိုးအစားခဲ့ကြသည်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု၏စာရင်းအင်းအရေးပါမှု
Two-Tails နှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီး t-စမ်းသပ်မှုနှင့် chi-စတုရန်း (χ2အသီးသီး) စာမေးပွဲများ။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဗားရှင်း 13.0 (IBM ကကော်ပိုရေးရှင်း, Armonk, နယူးယော့, USA) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အားလုံးစမ်းသပ်မှု 0.05 မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အဓိပ်ပာယျအဆငျ့အတူတဖက်သတ်နှစ်ယောက်တည်း။
လူနာ ၇၉၀ တွင်လူနာ ၄၃၉ ဦး (၅၅.၆%) တွင်စတင်တွေ့ရှိခဲ့သောအဓိကရောဂါအဖြစ် ED စတင်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် ၁၁၄ (၂၅.၉%) သည်≤ ၄၀ နှစ်ဖြစ်သည်။ ဇယား 1 40 နှစ်ပေါင်းများ၏မတရားအသက်အရွယ် cutoff အဆိုအရ segregated အဖြစ်, လူဦးရေဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ED နှင့်အတူလူနာတပြင်လုံးကိုဆောင်များတွင်၏ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, ED များအတွက်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရှာကြံဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီ၏အချိန်မှာလူနာအသက်≤40နှစ်ပေါင်းတစ်ပြသ
comorbid အခြေအနေနိမ့်မှုနှုန်း (အဖြစ်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျအဆိုပါ CCI နှင့်အတူဂိုး), တစ်ဦးအောက်ပိုင်းယုတ် BMI တန်ဖိုးအဝလွန်နှင့်လူတန်းစား≥1အဝလွန်ခြင်း, သွေးတိုးရောဂါနှင့် hypercholesterolemia တစ်နိမ့်မှုနှုန်းနှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားယုတ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ tt အဆင့်ကိုအကြံပြုနေသည်ဟု BMI နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏အနိမ့်အချိုးအစား သူတို့အားအဟောင်းတွေထက် 40 နှစ်ပေါင်း (အားလုံးနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက P ≤ 0.02) ။ ပြောင်းပြန် hypertriglyceridemia, MetS နှင့် hypogonadism နှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် (ဇယား) 1) ။ ထို့အပွငျအငယ် ED လူနာလိင်တူဆက်ဆံလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းနှင့်တည်ငြိမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး၏အနိမ့်အချိုးအစား (အားလုံးပြသ P ≤ 0.02) ။ အုပ်စုများအကြားပညာရေးအဆင့်အတန်းအရသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများထက်ပိုမိုငယ်ရွယ်သောလူနာများတွင်တစ်သက်တာ (သို့) ဝယ်ယူရရှိမှုများမှာသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသော comorbid အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုနှုန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်, Peyronie ရဲ့ရောဂါအဟောင်းအုပ်စု (အားလုံး P = 0.03), အုပ်စုနှစ်စုအကြားအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများ၏ပျံ့နှံ့မှု၌အဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်နေစဉ် (ဇယား) 1).
ဇယား ၁ ။ ≤အသက် ၄၀ နှင့်အနှစ် ၄၀ ကျော်ရှိသည့် ED လူနာများအတွက်ဖော်ပြချက်စာရင်းများ (အမှတ် = ၄၃၉)
လူနာ> အနှစ် 40
SD က = စံသွေဖည်; CCI = Charlson Comorbidity ညွှန်းကိန်း; BMI = ခန္ဓာကိုယ်
အစုလိုက်အပြုံလိုက်အညွှန်းကိန်း; ကနျြးမာရေး၏ NIH = အမျိုးသား Institutes; MeTs = ဇီဝဖြစ်စဉ်
syndrome ရောဂါ; tt = စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်း; PE = အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်
*P တန်ဖိုးအားχအညီ2 စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်လွတ်လပ်သော Two-tailed tညွှန်ပြအဖြစ်, -test
လူနာအမှတ် (%) 114 (25.9) 325 (74.1)
ခေတ် (နှစ်ပေါင်း; ယုတ် [SD က]) 32.4 (6.0) 57.1 (9.7)
အကွာအဝေး 17-40 41-77
CCI (အမှတ် [%]) <0.001 (χ2, 39.12)
BMI (ကီလိုဂရမ် / မီတာ2; ) [SD က] ဆိုလို 25.1 (4.1) 26.4 (3.7) 0.005
BMI (NIH ခွဲခြား) (အမှတ် [%]) 0.002 (χ2, 15.20)
သွေးတိုးရောဂါ (အမှတ် [%])6(5.3) 122 (37.5) <0.001 (χ2, 42.40)
Hypercholesterolemia (အမှတ် [%])4(3.5) 38 (11.7) 0.02 (χ2, 5.64)
Hypertriglyceridemia (အမှတ် [%])0(0.0) 10 (3.1) 0.12 (χ2, 2.37)
MeTs (အမှတ် [%])2(1.8) 10 (3.1) 0.57 (χ2, 0.74)
tt (ng / mL; ယုတ် [SD က]) 5.3 (2.0) 4.5 (1.8) 0.005
hypogonadism (စုစုပေါင်း <3 ng / mL) (အမှတ် [%]) 12 (10.3) 54 (16.6) 0.14 (χ2, 2.16)
လိင်တိမ်းညွတ် (အမှတ် [%]) 0.02 (χ2, 5.66)
လိင်ကွဲ 109 (95.6) 322 (99.1)
လိင်တူဆက်ဆံသူ5(4.4)3(0.9)
relationship status ကို (အမှတ် [%]) <0.001 (χ2, 27.51)
တည်ငြိမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုး≥6လအတွင်း 81 (71.4) 303 (93.2)
အဘယ်သူမျှမတည်ငြိမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေး 33 (28.6) 22 (6.8)
ပညာရေးဆိုင်ရာအဆင့်အတန်း (အမှတ် [%]) 0.05 (χ2, 9.30)
မူလတန်းကျောင်း0(0) 22 (6.8)
အလယ်တန်းကျောင်း 20 (17.5) 64 (19.7)
အထက်တန်းကျောင်း 51 (44.7) 141 (43.4)
တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ 43 (37.7) 98 (30.2)
Concomitant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်ကြားချက် (အမှတ် [%])
အနိမျ့လိင်စိတ် 10 (8.8) 23 (7.1) 0.55 (χ2, 0.35)
Peyronie ရဲ့ရောဂါ5(4.4) 37 (11.4) 0.03 (χ2, 4.78)
စားပှဲ 2 မိသားစုနှစ်စုခွဲထားသောအုပ်စုနှစ်စု၏လူနာများမှယူသောဆေးများကိုဖော်ပြထားသည်။ အလားတူပင်စားပွဲတင် 2 ထို့အပြင်လူနာအားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြသည့်အပန်းဖြေထုတ်ကုန်အသေးစိတ်များနှင့်
အသက်အရွယ်အုပ်စုခွဲခြား။ အဟောင်းတွေ ED လူနာကပိုမကြာခဏယူပြီးခဲ့ကြ
antihypertensive တစ်ဦးချင်းစီမိသားစုများအတွက်ဆေးဝါးအဖြစ် thiazide
ယောက်ျား≤40နှစ်ပေါင်း (အားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ် Diuretics ဆီးနှင့် lipid-လျှော့ချမူးယစ်ဆေးဝါးများ P
≤ 0.02) ။ အလားတူပင်အသက်ကြီးသောလူနာပိုပြီးမကြာခဏလည်းယူခဲ့ကြ
antidiabetics နှင့် uricosuric မူးယစ်ဆေးဝါး, LUTS များအတွက် alpha-blockers နှင့်ပရိုတွန်
pump inhibitors လူပျို (အားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ P ≤ 0.03) ။
ဇယား ၁ ။ ≤နှစ် ၄၀ နှင့်အနှစ် ၄၀ ရှိ ED လူနာများအတွက်ကုထုံးဆိုင်ရာဆေးဝါးများနှင့်အပန်းဖြေမှုအလေ့အထများ (အမှတ် ၄၃၉) ။
ACE အား-i = angiotensin-converting အင်ဇိုင်း inhibitors; SNRIs = serotonin နဲ့
reuptake inhibitors noradrenail; SSRIs = ရွေးချယ် serotonin reuptake
inhibitors; ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းရဲ့ = ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia; LUTS = အောက်ပိုင်းဆီး
ACE အား-i 1 (0.9) 47 (14.5) <0.001 (χ2, 14.62)
Angiotensin-II ကိုအဲဒီ receptor ရန်2(1.8) 41 (12.6) 0.002 (χ2, 9.95)
beta-1 blockers2(1.8) 44 (13.5) 0.0009 (χ2, 11.12)
ကယ်လ်ဆီယမ်ရန်0(0.0) 39 (12.0) 0.002 (χ2, 13.57)
loop Diuretics ဆီး0(0.0)6(1.8) 0.33 (χ2, 0.94)
Thiazide Diuretics ဆီး0(0.0) 18 (5.5) 0.02 (χ2, 5.20)
Antiarrhythmic မူးယစ်ဆေးဝါးများ 1 (0.9)6(1.8) 0.82 (χ2, 0.05)
Anticoagulant မူးယစ်ဆေးဝါးများ 1 (0.9) 10 (3.1) 0.35 (χ2, 0.89)
Antiplatelet မူးယစ်ဆေးဝါးများ 1 (0.9) 1 (1.8) 0.82 (χ2, 0.06)
lipid လျှော့ချဆေးများ (statins & / or fibrates)0(0.0) 43 (13.2) 0.0001 (χ2, 15.21)
Anticonvulsant မူးယစ်ဆေးဝါးများ 1 (0.9)6(1.8) 0.82 (χ2, 0.05)
Opioid မူးယစ်ဆေးဝါးများ0(0.0)2(0.6) 0.99 (χ2, 0.00)
Antiandrogenic မူးယစ်ဆေးဝါးများ0(0.0)3(0.9) 0.73 (χ2, 0.12)
Antithyroid မူးယစ်ဆေးဝါးများ0(0.0) 1 (0.3) 0.57 (χ2, 0.33)
Dopamine agonists2(1.8)4(1.2) 1.00 (χ2, 0.00)
Dopamine ရန်4(3.5)3(0.9) 0.14 (χ2, 2.19)
Antidiabetic မူးယစ်ဆေးဝါးများ3(2.6) 32 (9.8) 0.02 (χ2, 5.05)
အငျဆုလငျတိုးဆေးရညျ3(2.6) 23 (7.1) 0.13 (χ2, 2.31)
ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းရဲ့ / LUTS-related မူးယစ်ဆေးဝါးများ
5-alpha-reductase inhibitors 1 (0.9)6(1.9) 0.77 (χ2, 0.09)
Anticholinergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ 1 (0.9) 1 (0.3) 0.99 (χ2, 0.00)
Proton pump inhibitors2(1.8) 33 (10.2) 0.008 (χ2, 6.98)
Nonsteroidal anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ7(6.1) 14 (4.3) 0.60 (χ2, 0.27)
ဗီတာမင်များ2(1.8) 11 (3.4) 0.59 (χ2, 0.30)
Uricosuric မူးယစ်ဆေးဝါးများ0(0.0) 17 (5.2) 0.03 (χ2, 4.84)
စီးကရက်ဆေးလိပ် (အမှတ် [%]) 0.02 (χ2, 7.56)
လက်ရှိဆေးလိပ်သောက် 43 (37.8) 80 (24.6)
ယခင်ဆေးလိပ်သောက်သူများ 1 (0.9)7(2.2)
သောက်သည်ဘယ်တော့မှမ 70 (61.3) 238 (73.2)
အရက်စားသုံးမှု (မည်သည့်အသံအတိုးအကျယ် / တပတ်) (အမှတ် [%]) 0.52 (χ2, 0.41)
မှန်မှန် 88 (77.2) 262 (80.6) 0.16 (χ2, 1.93)
အရက်စားသုံးမှု (1-2 L / တပတ်) 26 (22.8) 98 (30.2) 0.96 (χ2, 0.00)
အရက်သောက်သုံးမှု (တစ်ပတ်လျှင် ၂ လီတာ)4(3.6) 10 (3.1)
နာတာရှည်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကို (မည်သည့်အမျိုးအစား) (အမှတ် [%]) 24 (20.9) 11 (3.4) <0.001 (χ2, 34.46)
ဆေးခြောက် / ဆေးခြောက် 24 (20.9)9(2.8) <0.001 (χ2, 37.29)
ကိုကင်း4(3.5)0(0.0) 0.005 (χ2, 37.29)
ဘိန်းဖြူ0(0.0)3(0.9) 0.73 (χ2, 7.92)
နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (ဆေးခြောက် / ဆေးခြောက်နှင့်ကိုကင်းနှစ်ဦးစလုံး) ၏အသုံးပြုမှုကိုအဖြစ်
40 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ကြီး (အားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ P ≤ 0.02) ။ အုပ်စုများအကြားအရက်သောက်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့သည် (ဇယား 2).
စားပှဲ 3 အသေးစိတျငါး IIEF ရမှတ် domains များအတွက် (SD) ရမှတ်ဆိုလို; အဘယ်သူမျှမ
သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုအကြားမည်သည့် IIEF ဒိုမိန်းများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်
အငယ်နှင့်အထက်သစ်ကိုစတင်ခြင်း ED လူနာ။ ထိုနည်းတူယောက်ျားအသက်≤40
နှိုင်းယှဉ်ပါကပြင်းထန် ED ၏အလားတူနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပျံ့နှံ့ပြသ
အသက်ကြီးသောလူနာနှင့်အတူ။ အလားတူပင်ပျော့-to-အလယ်အလတ်ပျော့၏နှုန်းထားများ, နှင့်
အလယ်အလတ် ED ယင်းအုပ်စုနှစ်စုအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောမ
ဇယား ၁ ။ IIEF-ဒိုမိန်းရမှတ်များနှင့် years နှစ် ၄၀ နှင့်> နှစ်အရွယ် ED လူနာများတွင် ED ပြင်းထန်မှုနှုန်း (အမှတ် = ၄၃၉)
IIEF-domains များ ([SD က] ဆိုလို)
Erectile ရာထူးအမည်များ၏ IIEF = အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း; EF = Erectile ရာထူးအမည်
ဒိုမိန်း; = လိင်ဆက်ဆံစိတ်ကျေနပ်မှုဒိုမိန်း IS; OF = orgasm function ကို
ဒိုမိန်း; SD က = လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဒိုမိန်း; OS ကို: ခြုံငုံကျေနပ်မှုဒိုမိန်း;
ED erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု =
*P Two- အမြီးကျောင်းသားရဲ့အရသိရသည်တန်ဖိုး t-test သို့မဟုတ်χ2 ညွှန်ပြအဖြစ်စမ်းသပ်,
† ED ပြင်းထန်မှု Cappelleri et al နေဖြင့်အကြံပြုခွဲခြားသည်နှင့်အညီခွဲခြားခဲ့ပါသည်။ .
IIEF-SD က 6.98 (2.3) 6.57 (2.1) 0.36
IIEF-OS ကို 4.95 (2.6) 5.06 (2.5) 0.82
IIEF ပြင်းထန်မှု† (အဘယ်သူမျှမ [%])
ပုံမှန် EF 11 (9.3) 39 (11.9) 0.73 (χ2, 2.01)
အပျော့စား ED 16 (14.0) 55 (16.8)
အပျော့စား-to-အလယ်အလတ် ED 10 (9.3) 51 (15.8)
အလယ်အလတ် ED 21 (18.6) 48 (14.9)
ပြင်းထန် ED 56 (48.8) 132 (40.6)
တစ်ဦးမှာသစ်ကိုစတင်ခြင်း ED များအတွက်ပထမဦးဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြံလိင်တက်ကြွယောက်ျား
နိုင်ရန်အတွက်တစ်ခုတည်းသောတစ် 30 လကာလအတွင်းပညာသင်နှစ်ပြင်ပလူနာဝန်ဆောင်မှု
ED ရောဂါ၏အချိန်တွင် 40 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ကြီးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ကျနော်တို့ ED နှင့်အတူလူလေးယောက်ထဲကတဦးတည်း 40 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပွငျအငယ်နှင့်အထက် ED လူနာအလားတူအချိုးအစားကိုပြု၏
ပြင်းထန် ED ၏ညည်းညူ။ ထိုနည်းတူစွာအငယ်နှင့်အထက်လူနာများအညီအမျှ
orgasm, အရှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအပါအဝင်, တစ်ခုချင်းစီ IIEF ဒိုမိန်းသွင်းယူ
function ကိုနှင့်ခြုံငုံစိတ်ကျေနပ်မှု။ တစ်ဦးအဖြစ်ထို့ကြောင့်လေ့လာရေး
ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုဆေးဝါးနှင့် sociodemographic အန္တရာယ်အချက်များ
ကျယ်ပြန့်ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများအတွက်အကဲဖြတ် [7-10, 13, 14, 25]။ ယေဘုယျအား, အသက်ပေါင်းများစွာလေ့လာမှုများအသက်အရွယ်နှင့်အတူပညာရေး၏သိသာများပြားဖေါ်ပြခြင်းနှင့်တကွ, သြဇာအရှိဆုံးတဦးတည်းစဉ်းစားသည် [7, 8, 26];
ကြောင်းအသက်အရွယ်အများဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန် ED နှင့်အတူဆက်စပ် variable ကိုခဲ့သည် ။ အသက်အရွယ်အပြင်မြောက်မြားစွာနဲ့အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအားပြင်းထန်စွာ ED နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ [7, 10, 12-14, 26].
ဒါမှမဟုတ်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ comorbid အခြေအနေများပိုမိုနှင့်, မ
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသူတို့မကြာခဏ ED ကိုလည်းတိုင်ကြား။ ဤအကြောင်းများကြောင့်အများစု
ED ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အဆိုပါ epidemiological လေ့လာမှုများ
အသက် 40 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ကြီးတဲ့လူဦးရေအတွက်ထွက်သယ်ဆောင်နေကြသည်;
တစ်ဦးချင်းစီ [14-16, 26, 27].
ယေဘုယျအားဤနောက်ပိုင်းတွင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများ ED ရှားပါးမဟုတ်ကြောင်းပြသ
ပင်ငယ်ရွယ်သောလူတို့တွင်အခွအေနေ။ Mialon et al ။ ဥပမာ, အစီရင်ခံတင်ပြ
ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့ဆွစ်ဇာလန်လုလင်တစ်ဦးဆောင်များတွင်အတွက် 29.9% ခဲ့ကြောင်း ။ အလားတူပင် Ponholzer et al ။  20-80 အသက်ယောက်ျားတစ်ဆက်တိုက်စီးရီးအတွက် ED အလားတူနှုန်းထားများတွေ့ရှိခဲ့
အလားတူပင်မာတင်နှင့် Abdo  1,947 ယောက်ျား 18-40 နှစ်ပေါင်းအသက်ဘယ်မှာ cross-section လေ့လာမှုကနေအသုံးဒေတာ
အဟောင်းကို 18 အဓိကဘရာဇီးမြို့ကြီးများ၏အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများ၌ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ကြနှင့်
အမည်မသိမေးခွန်းလွှာသုံးပြီးတွေ့ဆုံမေးမြန်း; သူတို့၏အမျိုးအခြုံငုံ, 35%
တစ်ဦးချင်းစီ erectile အခက်အခဲအချို့အဆင့်အစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။
အကဲဖြတ်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် extrapolated လူပျိုတို့အတွက်ပညာရေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
ED များအတွက်ပထမဦးဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြံဆေးခန်း; ဤအခြေအနေတွင်ကျနော်တို့တွေ့ရှိခဲ့
အဆိုပါနေ့စဉ်လက်တွေ့လက်တွေ့တွင် ED ခံစားနေရပြီးလူနာလေးပုံတစ်ပုံ
ယောက်ျား 40 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်ကိုအောက်တွင်ရှိပါသည်။ ဤသည်ကိုရှင်းလင်းစွာယခင်အတည်ပြု
လူဦးရေ-based လေ့လာမှုများကနေ့ epidemiological data, အရှင်ကြောင်းရှင်းလင်း
ED အိုမင်းအထီးတစ်ရောဂါနှင့် erectile function ကိုမသာဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါနေ့စဉ်လက်တွေ့မြင်ကွင်းပုံဖော်တင်ဆက် ပို. ပင်ကိုရည်မှတ်စေသည်
အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အတူကျွမ်း; အကယ်စင်စစ်, အအတော်လေးနိမ့်ပေးထား
40 အနှစ် ကျနော်တို့နှုန်း se ED သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုခုပင်လျော့နည်းလူပျိုတို့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ကိုအလွန်ကြောက်ရွံ့ရိုသေ .
အောက်ပိုင်း CCI ဖေါ်ပြခြင်း 40 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျား, အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကကျန်းမာသန်စွမ်း
CVDs တစ်အောက်ပိုင်းယုတ် BMI နှင့်သွေးတိုးရောဂါ၏အနိမ့်ပျံ့နှံ့။
အလားတူပင်မဟုတ်, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, အငယ်တစ်ဦးချင်းစီပိုမိုမြင့်မားယုတ် tt ခဲ့
အရှင်အခိုင်အမာ 40 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ကြီးတဲ့လူနာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကအဆင့်ဆင့်,
ဥရောပအိုမင်းလူတို့တွင် epidemiological စစ်တမ်းများအများစု .
ထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားအတွက်ဆီးချိုရောဂါနှင့် CVDs အဖြစ် ED များအတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်အော်ဂဲနစ်အန္တရာယ်အချက်များ
အဟောင်းကိုအသက် 18-40 နှစ်ပေါင်း .
ယေဘုယျအားဤကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့် ED အတွက်တကယ်တော့ပေးခြင်း, မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသည်
[8, 30, 31]။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Mialon et al ။  အငယ်နှင့်အထက် ED ယောက်ျားအကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားချက်ဖြစ်ကြောင်းပြသ
ဆေးဝါးများဆီသို့စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်သဘောထားကို။ ED ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်များတွင်အတွက်
စီးကရက်ဆေးလိပ်နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (ဆိုလိုသည်မှာ, ဆေးခြောက် / ဆေးခြောက်နှင့်
အသက်ကြီးသောလူနာထက်ကိုကင်း) ။ ၏နာတာရှည်အသုံးပြုမှုအပေါ်ယခင်ဒေတာ
မူးယစ်ဆေးဝါးများ-အထူးသဖြင့်ဆေးခြောက်, opiates, နှင့်မျှမပြကိုကင်း-ပါပြီ
ED နှင့်အတူ link တစ်ခု၏တည်ပြီးသတ်တယ်သက်သေအထောက်အထား [32-34],
ပင် erectile function ကိုချို့ယွင်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်နာတာရှည်စီးကရက်ဆေးလိပ်
ငယ်ရွယ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် [7, 34-37].
လုလင်တို့သည်အတွက်ပညာရေး၏စတင်ခြင်း, ဒါပေမယ့်သူကဆက်ဆက် hypothesize မှကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါသည်
erectile function ကိုချို့ယွင်းမြှင့်တင်ရန်။ ပြောင်းပြန်, ဒီနာတာရှည်
40 နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီး, မကြာခဏသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် ED များအတွက်ပထမဦးဆုံးအကူအညီကိုရှာခြင်းငှါလာကြ
ကျနော်တို့ psychometrically နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက် ED ပြင်းထန်မှု၏နှုန်းထားများအကဲဖြတ်;
ED ပြင်းထန်၏နှိုင်းယှဉ်အချိုးအစားအုပ်စုများအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၏
အဓိကအရေးပါမှု, အသက် 40 နှစ်ပေါင်းအောက်ကတစ်ဦးချင်းစီ၏ထက်ဝက်နီးပါး
Cappelleri et al အဆိုအရပြင်းထန် ED ထံမှခံရခဲ့ပါဘူး။ ,
စိုက်ထူ၏ချွတ်ယွင်းအငယ်အတွက် invalidating အဖြစ်ကိုရိပ်မိစေခြင်းငှါ
အားလုံးအသက်အရွယ်။ ထိုနည်းတူကျနော်တို့ကိုဘယ်လိုအငယ်နှင့်အထက် ED လူနာအကဲဖြတ်
ကွဲပြားခြားနားသော IIEF ဒိုမိန်းများ။ ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်ဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီ
ငါးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို domains များအတွက် longitudinal အပြောင်းအလဲများကိုအတူတကွခြေရာခံ
ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီ IIEF ဒိုမိန်းအတွက်မဆိုသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုစောငျ့ရှောကျဘူး
ပင် ED များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံအကြောင်းရင်းများနှင့်တကွ, IIEF tool ကိုမဖွစျနိုငျ
ED နောက်ကွယ်မှတိကျစွာအဆိုပါ pathophysiology ခွဲခြားနိုင်။ တကယ်ပါပဲ,
ED, အဖြစ်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ IIEF-erectile function ကိုအတူအနက်ပေမဲ့
ဒိုမိန်းဖြစ်ရသောတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မား CCI များအတွက်အကောင့်မှသရုပ်ပြခဲ့ပြီး
, အနိမ့်အထီးယေဘုယျကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကိုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော proxy ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား
မသက်ဆိုင် ED ၏ etiology ၏ , Deveci et al ။  ယခင်က IIEF နိုင်မည်အကြောင်းကြောင်းပြသရန်ပျက်ကွက်
အော်ဂဲနစ်နှင့် psychogenic ED အကြားခွဲခြားမှု။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ဖြစ်ပါတယ်
လေ့လာမှုအတော်များများ ED တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုကြောင်းဆက်ဆက်စစ်မှန်တဲ့
CVD ဖြစ်ရပ်များအထွေထွေပေါ်ထွန်းခြင်း [40, 41]။ ၎င်းတို့အနက် et al Chew ။ ,
ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးအတွက် CVD ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ် ED စုံစမ်းစစ်ဆေး
အသက် 20 နှင့် 89 နှစ်အကြားအထိ ED နှင့်အတူယောက်ျား၏လူဦးရေ; ဤ
စာရေးသူပညာရေးလူနာ CVD ဖြစ်ရပ်များအတွက်ကြီးမြတ်သောဆွေမျိုးအန္တရာယ်တွေ့ရှိခဲ့
40 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်။ ပြောင်းပြန်တစ် ED ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တန်ဖိုးကိုယုတ်လျော့
CVD ဖြစ်ရပ်များများအတွက်အဟောင်းတွေလူဦးရေအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် .
ကြောင်း ED စိစစ်ငယ်ရွယ်ဖော်ထုတ်များ၏တန်ဖိုးရှိသောနည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်
ဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုတွင်လူနာဖြစ်ကောင်းတစ် nonorganic ED ထံမှခံရမယ်လို့
၏အော်ဂဲနစ် ED ၏စောဒကသူတို့ထဲကတစ်ဦးအချိုးအစားရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်
ပညာရေးအနေနဲ့များအတွက်သာ Sentinel အမှတ်အသားဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ် etiologies,
ကနျြးမာရေး၏ incipient ယိုယွင်းပျက်စီးလာ (ဆိုလိုသည်မှာ, သွေးကြော) ။ ဤသည်၌
စကားစပ်, Kupelian et al ။ ဥပမာ, 928 ယောက်ျား၏လူဦးရေကိုလေ့လာ
MeTs ခြင်းမရှိဘဲ, ED နောက်ဆက်တွဲ Developers များအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ခဲ့ကြောင်းပြသ
အခြေခံမှာပုံမှန် BMI နှင့်အတူလူနာအတွက် MeTS ,
အရှင်လုလင်တို့ကလှုံ့ဆျောကူညီရန်ပြဿနာအဖြစ် ED ၏တန်ဖိုးကိုအလေးပေး
၏အန္တရာယ် modulate ရသောရေရှည်ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့, ရှိသည်
အခြားသူတွေအကြားဆီးချိုရောဂါနှင့် CVD တူသောရောဂါများ။
ပညာရေး၏, ဤသို့ပျော့ ED နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏နံပါတ်လက်လွတ်ဖို့ကိုဦးဆောင်ခြင်းနှင့်
အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်, အရှင်, နှစ်ဦးစလုံးအသက်အုပ်စုများအတွက်အညီအမျှပစ္စုပ္ပန်ပါလိမ့်မယ်
အတည်ပြု psychometric တူရိယာကို အသုံးပြု. စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏နှုန်းထားများ။
စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး, ဖြစ်ကောင်း bidirectional ဖြစ်၏ အမှန်ပင်, ED
အလှည့်၌, ဖြစ်နိုင်သည်, ထိုစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေပြီးနောက်ဝယ်ယူစေခြင်းငှါ
မဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကျိုးဆက်။ ကြောင်းလုပ်နိုင်မယ့် tool တစ်ခုထားရှိခြင်း
ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကာလ။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းခုနှစ်တွင်မာတင်နှင့် Abdo  အလွန်ငယ်ရွယ်လူနာအတွက်လိင်အပေါ်အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းခဲ့ပုံကိုပြသ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မညီကြောင်းအားဖြင့်ကြီးပြင်းဖြစ်နိုင်သောကြောက်ရွံ့သံသယ၏ ED နှင့်ဆက်စပ်
နှင့် Unreal မျှော်မှန်းချက်။ အဆိုပါလျှောက်လုံးအခက်အခဲနှင့်အတူလူနာ
သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၏အစအဦးဖြစ်ကောင်း, ED မြင့်မားဖြစ်ပျက်မှုပြသ
တစ် ဦး ချင်းစီ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် .
ကျနော်တို့ကြောင့်အနိမ့်မှဝင်ငွေသတင်းအချက်အလက်ကိုတောင်းဆိုဖို့မ, သို့သော်, ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
၏နေ့စဉ်လက်တွေ့လက်တွေ့တွင် ED များအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြံလူလေးယောက်
တစ်ဦးပြင်ပလူနာဆေးခန်း 40 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်ကိုအောက်တွင်လုလင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး,
လုလင်များ၏ထက်ဝက်ခန့်သည်ဤဖြစ်ခြင်း, ပြင်းထန် ED ခံစားခဲ့ရ
မသက်ဆိုင်ဘဲမူလမိမိတို့၏အသက် ED ။ ထိုနည်းတူစွာရှာ၏အနိမ့်မှုနှုန်းပေးပြီ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူလူကြီးမင်းကိုမေးစေခြင်းငှါ ပို. ပင်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြ
အသက် 40 နှစ်ပေါင်း။ လက်ရှိနမူနာအရွယ်အစားဖြစ်ကောင်းငါတို့သည်န့်အသတ်သောကွောငျ့
ယေဘုယျကောက်ချက်ရယူထားခြင်းမနိုင်, သို့ဖြစ်. , နောက်ထပ်လေ့လာမှုများ
နောက်ထပ်တစ်ဦး harbinger အဖြစ် ED ပြင်းထန်မှု၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍရဲ့အနှစ်သာရကမှ
Michele Colicchia; အေသြကန်ယို Ventimiglia; Giulia Castagna; မာရီယာ Chiara Clementi; Fabio Castiglione
Andrea Salonia; အယ်လ်ဘာတို Briganti; Rocco Damiano
Glina S က, Sharlip ID ကို, Hellstrom WJ. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတားဆီးများနှင့်ဆက်ဆံဖို့မွမ်းမံအန္တရာယ်အချက်များ. J ကိုလိင် Med 2013;10:115-119.
PDF ဖိုင် (75K)
Corona, G, Lee က DM, လေးဆယ်, G, O'Connor DB, မဂ္ဂီကို M, O'Neill TW, Pendleton N ကို, Bartfai, G, Boonen S က, Casanueva FF, ဖင်လန် JD, Giwercman တစ်ဦးက, ဟန် TS, Huhtaniemi အိုင်တီ, ကုလ K သည်, ME အမှီ, Punab M က, Silman AJ, Vanderschueren: D, ဝူ FC အသင်း, EMAS လေ့လာမှု Group မှ. အသက်အရွယ်-ဆက်စပ်
ဥရောပအမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု (EMAS) မှရလဒ်များ. J ကိုလိင် Med 2010;7:1362-1380.
PDF ဖိုင် (321K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 61
Salonia တစ်ဦးက, Castagna, G, သစ္စာတစ်ဦးက, Ferrari ပြိုင်ကား M က, Capitanio ဦး, Castiglione က F, Rocchini L ကို, Briganti တစ်ဦးက, Rigatti P ကို, Montorsi က F. Is
erectile ယေဘုယျအထီးကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကိုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော proxy ကို dysfunction?
Erectile ရာထူးအမည်-Erectile ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်းများအတွက်အမှု
function ဒိုမိန်း. J ကိုလိင် Med 2012;9:2708-2715.
PDF ဖိုင် (106K)
Montorsi က F, Briganti တစ်ဦးက, Salonia တစ်ဦးက, Rigatti P ကို, Margonato တစ်ဦးက, Macchi တစ်ဦးက, Galli S က, Ravagnani pm တွင်, Montorsi P ကို. Erectile
စူးရှသောရင်ဘတ်နာကျင်မှုနှင့် angiographically နှင့်အတူ 300 ဆက်တိုက်လူနာအတွက်
မှတ်တမ်းတင်သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောရောဂါ. EUR Urol 2003;44:360-364.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 231
Guo W က, Liao ကို C, Zou Y ကို, လီက F, လီ T က, zhou မေး, Cao Y ကို, မော်စီတုန်းက X. Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လက်တွေ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၏အန္တရာယ်ခုနစ်ရက်ဆောင်များတွင်လေ့လာမှု Meta-analysis သည်. J ကိုလိင် Med 2010;7:2805-2816.
PDF ဖိုင် (541K)
dong JY, Zhang က YH, Qin LQ. Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါအန္တရာယ်: အလားအလာဆောင်များတွင်လေ့လာမှုတွင် Meta-analysis သည်. J ကို Am Coll Cardiol 2011;58:1378-1385.
Feldman HA, စတိန်းငါ, Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB. သင်ျခြိုနှင့်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု: အမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှုရလဒ်များ. J ကို Urol 1994;151:54-61.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 2192
Laumann EO, ပိုက်တစ်ဦးက, ရို RC. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း. ဂျေအေအမ်အေ 1999;281:537-544.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 1886
Prins J ကို, Blanker MH, Bohnen AM, သောမတ်စ် S က, Bosch ရဲ့ JL. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့: လူဦးရေ-based လေ့လာမှုတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု. int J ကိုသင်ျခြို Res 2002;14:422-432.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 91
Roth တစ်ဦးက, Kalter-Leibovici အို, Kerbis Y ကို, Tenenbaum-Koren E ကို, Chen က J ကို, Sobol T က, Raz ငါ. ပျံ့နှံ့
ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အန္တရာယ်အချက်များ,
သွေးတိုးရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးရောဂါများ: 1,412 အစ္စရေးအကြားတစ်ဦးကအသိုင်းအဝိုင်းစစ်တမ်း
ယောက်ျား. Clin Cardiol 2003;26:25-30.
PDF ဖိုင် (57K)
Hyde Z ကို, တုန်ခါမှုတွေ L ကို, Hankey GJ, Almeida OP, McCaul ka, Chubb လုပ် SA, Yeap BB. ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် 75-95 နှစ်ပေါင်းအသက်ယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏ခန့်မှန်းမြား: A လူဦးရေ-based လေ့လာမှု. J ကိုလိင် Med 2012;9:442-453.
PDF ဖိုင် (339K)
Gacci M က, Eardley ငါ, Giuliano က F, Hatzichristou: D, Kaplan လုပ် SA, မဂ္ဂီကို M, McVary KT, Mirone V ကို, Porst H ကို, Roehrborn CG. ဝေဖန်
ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia ကြောင့်ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါလက္ခဏာ. EUR Urol 2011;60:809-825.
Parazzini က F, Menchini Fabris က F, Bortolotti တစ်ဦးက, Calabròတစ်ဦးက, Chatenoud L ကို, Collis, E, Landoni M က, Lavezzari M က, Turchi P ကို, Sessa တစ်ဦးက, Mirone V ကို. frequency နဲ့အီတလီနိုင်ငံ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆုံးအဖွတျ. EUR Urol 2000;37:43-49.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 113
Ponholzer တစ်ဦးက, Temml ကို C, လှောင်ပြောင် K သည်, Marszalek M က, Obermayr R ကို, Madersbacher S က. တစ်ဦးအတည်ပြုမေးခွန်းလွှာသုံးပြီး 2869 ယောက်ျားအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်အချက်များ. EUR Urol 2005;47:80-85.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 114
Mialon တစ်ဦးက, Berchtold တစ်ဦးက, Michaud PA ဆိုပြီး, Gmel, G, Suris JC. လုလင်တို့သည်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ. J ကို Adol ကနျြးမာရေး 2012;51:25-31.
Martins အပြည်ပြည်သွား, Abdo CH. 18-40 နှစ်ပေါင်းအသက်ဘရာဇီးအမျိုးသားများတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်အချက်များ. J ကိုလိင် Med 2010;7:2166-2173.
PDF ဖိုင် (98K)
Pescatori ES, Giammusso B ကို, Piubello, G, လူမျိုးခြား V ကို, Farina လက်ဗွေ. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာအထူးကုမှတင်ပြအကူအညီတောင်းတောင်းဆိုမှုများ၏ဘုံသို့ခရီး: အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲမိတ်ဆက်ခြင်း. J ကိုလိင် Med 2007;4:762-770.
PDF ဖိုင် (107K)
ခွန်အားမရှိခြင်းအပေါ် NIH သဘောတူညီမှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ panel က. ဂျေအေအမ်အေ 1993;270:83-90.
Charlson ME, ပေါင်ပေ P ကို, Ales KL, Mackenzie CR. longitudinal လေ့လာမှုများအတွက်၏အခြင်း comorbidity ခွဲခြား၏အသစ်နည်းလမ်း: ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတည်ပြု. J ကိုနာတာရှည် dis 1987;40:373-383.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 8847
ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes, အမျိုးသားနှလုံး, အဆုတ်နှင့်သွေး Institute က. အဆိုပါမှတ်ပုံတင်, အကဲဖြတ်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-အဆိုပါအထောက်အထားအစီရင်ခံစာအတွက်အဝလွန်နှင့်အဝလွန်ခြင်း၏ကုသမှုအပေါ်လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်များ. အဝလွန်ခြင်း Res 1998;6(ပျော့ပျောင်း):51-210S.
Grundy သည် SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato ka, Eckel RH အ, Franklin BA ဘွဲ့, ဂေါ်ဒွန် DJ သမား, Krauss RM, ဗေ့ခ်ျ PJ, Smith က SC Jr, Spertus ဂျေအေ, ကော်စတာက F, American Heart Association; အမျိုးသားနှလုံး, အဆုတ်နှင့်သွေး Institute က. ရောဂါအမည်ဖေါ်ခြင်း
နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ၏စီမံခန့်ခွဲမှု: An American Heart
အစည်းအရုံး / အမျိုးသားနှလုံး, အဆုတ်နှင့်သွေး Institute မှသိပ္ပံ
ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်. သှေးလှညျ့ခွငျး 2005;112:2735-2752.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 3016
လက်တွေ့ endocrinologist ဖြစ်သူ၏အမေရိကန်အစည်းအရုံး. အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးလူနာ-2002 update ကိုအတွက် hypogonadism ၏အကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှုများအတွက်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်များအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ. Endocr Pract 2002;8:440-456.
ရို RC, Riley တစ်ဦးက, Wagner, G, Osterloh ih, ပက်ထရစ် J ကို, Mishra တစ်ဦးက. Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF): erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကဲဖြတ်များအတွက်တစ်ဦးက multidimensional စကေး. Urology 1997;49:822-830.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 1848
Cappelleri JC, ရို RC, Smith က MD, Mishra တစ်ဦးက, Osterloh ih. Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း၏ erectile function ကိုဒိုမိန်း၏ diagnostic အကဲဖြတ်. Urology 1999;54:346-351.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 431
ကေးကဂျေအေ, Jick H ကို. အဖြစ်အပျက်
လက်ဝါးကပ်တိုင်: ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက် sildenafil ၏နိဒါန်းပြီးနောက်
နှိုင်းယှဉ်မှုလူနာနှင့်အတူပုဒ်မလေ့လာမှု. br Med J ကို 2003;22:424-425.
Braun M က, Wassmer, G, Klotz T က, Reifenrath B ကို, Mathers M က, Engelmann ဦး. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကူးစက်ရောဂါ: က "Cologne အမျိုးသားစစ်တမ်း" ၏ရလဒ်များ. int J ကိုသင်ျခြို Res 2000;12:305-311.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 373
မာတင်-Morales တစ်ဦးက, Sanchez-Cruz JJ, Saenz က de Tejada ငါ, Rodriguez-Vela L ကို, Jimenez-Cruz JF, Burgos-Rodriguez R ကို. ပျံ့နှံ့
စပိန်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လွတ်လပ်သောအန္တရာယ်အချက်များ: ရလဒ်များ
အဆိုပါ Epidemiologia de la Disfunction Erectil MAsculina လေ့လာမှု၏. J ကို Urol 2001;166:569-574.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 225
de Berardis, G, Pellegrini က F, Franciosi M က, Pamparana က F, Morelli P ကို, Tognoni, G, Nicolucci တစ်ဦးက, ဧဒင်ဥယျာဉ်လေ့လာမှု Group မှ. ယေဘုယျအလေ့အကျင့်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏စီမံခန့်ခွဲမှု. J ကိုလိင် Med 2009;6:1127-1134.
PDF ဖိုင် (170K)
Akre ကို C, Michaud PA ဆိုပြီး, Suris JC. “ ပထမဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေပါမည်” - လူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အတားအဆီးနှင့်ကျော်လွှားနိုင်သောအတားအဆီးများကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်း. ဆွစ်ဇာလန် Med Wkly 2010;140:348-353.
Angst J ကို. ကျန်းမာစိတ်ဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ. int Clin Psychopharmacol 1998;13(ပျော့ပျောင်း 6):S1-4.
Gratzke ကို C, Angulo J ကို, Chitaley K သည်, ဒိုင် YT, ကင်မ် NN, Paick JS, Simonsen ဦး, Uckert S က, Wespes E ကို, Andersson Ke, Lue TF, Stief CG. ခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ pathophysiology. J ကိုလိင် Med 2010;7:445-475.
PDF ဖိုင် (479K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 51
Aversa တစ်ဦးက, ရော့စီက F, Francomano: D, Bruzziches R ကို, Bertone ကို C, Santiemma V ကို, Spera, G. ငယ်ရွယ်လေ့ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက် vasculogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အမှတ်အသားအဖြစ်အစောပိုင်း endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှု. int J ကိုသင်ျခြို Res 2008;20:566-573.
Shamloul R ကို, Bella AJ. အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏သက်ရောက်မှု. J ကိုလိင် Med 2011;8:971-975.
PDF ဖိုင် (73K)
Mannino DM, Klevens RM, ဖလန်းဒါးစ် WD. စီးကရက်ဆေးလိပ်: ခွန်အားမရှိခြင်းများအတွက်တစ်ဦးလွတ်လပ်သောအန္တရာယ်အချက်? နံနက် J ကို Epidemiol 1994;140:1003-1008.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 105
Nicolosi တစ်ဦးက, Moreira ED Jr, Shirai M က, bin Tambi MI, Glasser DB. ကူးစက်ရောဂါ
၏ Cross-အမျိုးသားရေးလေ့လာမှု: လေးနိုင်ငံများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏
ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆက်စပ်မှု. Urology 2003;61:201-206.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 167
ရို RC, တောင်ပံ R ကို, Schneider က S, Gendrano N ကို. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကူးစက်ရောဂါ: ဆေးပညာဆိုင်ရာ comorbidities နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်တွေများ၏အခန်းကဏ္ဍ. Urol Clin မြောက်အမေရိက Am 2005;32:403-417.
Hart သမဝါယမ, Meston CM. ထက်မြက်သော
ကွေယောက်ျား: ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး. J ကိုလိင် Med 2008;5:110-121.
PDF ဖိုင် (293K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 15
Gades မိုင်, Jacobson DJ သမား, McGree ME, စိန့် Sauver JL, Lieber MM, Nehra တစ်ဦးက, Girman CJ, Jacobsen SJ. longitudinal
အထီးဆောင်များတွင်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို၏အကဲဖြတ်: အဆိုပါ Olmsted ခရိုင်
လူတို့တွင်ဆီးရောဂါလက္ခဏာနှင့်ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းလေ့လာမှု. J ကိုလိင် Med 2009;6:2455-2466.
PDF ဖိုင် (263K)
Deveci S က, O'Brien K, Ahmed ကတစ်, က Parker M က, P ကို ​​Guhring, Mulhall JP. Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်းအော်ဂဲနစ်နှင့် psychogenic erectile function ကိုခွဲခြားနိုင်ပါသလား? BJU Int 2008;102:354-356.
PDF ဖိုင် (93K)
Schouten BW, Bohnen AM, Bosch ရဲ့ JL, Bernsen RM, နှစ်ထပ် JW, Dohle ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, သောမတ်စ် S က. Erectile
ဒတ်ခ်ျယေဘုယျလူဦးရေ: အ Krimpen လေ့လာမှုကနေရလဒ်များ. int J ကိုသင်ျခြို Res 2008;20:92-99.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 52
KK ဝါး, ဖင်လန် J ကို, Stuckey B ကို, Gibson N ကို, Sanfilippo က F, Bremner တစ်ဦးက, Thompson က: P, Hobbes က M, Jamrozik K သည်. တစ်ဦးနှင့်ဆက်နွယ်-data တွေကိုလေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်: နောက်ဆက်တွဲ atherosclerotic နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအတွက်တစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု. J ကိုလိင် Med 2010;7:192-202.
Kupelian V ကို, Shabsigh R ကို, Araujo AB, O'Donnell AB, McKinlay JB. အိုမင်းယောက်ျားအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ၏ခန့်မှန်းအဖြစ် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: အမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှုကနေရလဒ်များ. J ကို Urol 2006;176:222-226.
Brotons FB, Campos JC, Gonzalez-Correales R ကို, Martin-Morales တစ်ဦးက, Moncada ငါ, Pomerol JM. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ် core စာရွက်စာတမ်း: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာများ၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက် Key ကိုရှုထောင့်. int J ကိုသင်ျခြို Res 2004;16(2 ပျော့ပျောင်း):S26-39.
Travison TG, ခန်းမလုပ် SA, Fisher က WA, Araujo AB, ရို RC, McKinlay JB, သဲက MS. PDE5i ၏ဆက်စပ်မှုနှစ်ခုလူဦးရေကိုအခြေခံပြီးစစ်တမ်းများအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအကြားတွင်ကိုသုံးပါ. J ကိုလိင် Med 2011;8:3051-3057.